भिक्टोरिया र न्यूसाउथवेल्सका अस्पतालमा कोरोना बिरामी बढे, तास्मानियामा घटे ! « KBC khabar
भिक्टोरिया र न्यूसाउथवेल्सका अस्पतालमा कोरोना बिरामी बढे, तास्मानियामा घटे !
होबार्टको जेलमा रहेका कैदीलाई पनि कोरोना पोजेटिभ
२७ पुष २०७८, मंगलवार ०९:०८
अष्ट्रेलियामा कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिँदै जाँदा अस्पतालहरुमा यसको चाप बढेको छ । न्यूसाउथवेल्समा यतिबेला २ हजार १ सय ८६ जना कोरोना संक्रमित अस्पतालमा छन् भने यीमध्ये १ सय ७० जना आईसीयूमा छन् । गएको २४ घण्टामा ११ जनाले कोरोनाको कारण नै ज्यान गुमाएका छन् ।
कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएको १६ वर्षमाथिको उमेर समूहको प्रतिशत ९५ दशमलब १ पुगेको छ भने दुबै डोज लगाउनेको संख्या ९३ दशमलब ७ छ ।
न्यूसाउथवेल्समा एन्टीजेन टेष्टबाट प्राप्त नतिजालाई अंकीत गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएकोले यहाँ भएका ७१ हजार ३ सय २५ पीसीआर परीक्षणमा २५ हजार ८ सय ७० जनालाई कोरोना देखिएको हो ।
NSW COVID-19 update – Tuesday 11 January 2022
– 93.7% of people aged 16+ have had two doses ofaCOVID-19 vaccine pic.twitter.com/elxNhwELuJ
— NSW Health (@NSWHealth) January 10, 2022
भिक्टोरियामा गएको २४ घण्टामा कोरोनाका कारण १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । यतिबेला भिक्टोरियाका अस्पतालहरुमा ८ सय ६१ जना कोरोना संक्रमित छन् जसमध्ये १ सय १७ जना आईसीयूमा उपचार गराइरहेका छन् ।
More data soon: https://t.co/OCCFTAtS1P#COVID19Vic #COVID19VicData pic.twitter.com/7HJmrV6TZn
यसअघि अक्टोबरमा मात्रै ८ सय ५१ जना कोरोना संक्रमित अस्पतालमा थिए । त्यसपछि विस्तारै निको हुनेको संख्या धेरै बन्दैगर्दा फेरि अस्पतालमा चाप बढेको तथ्यांकले देखाएको हो । ३७ हजार ९ सय ९४ कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
उता तास्मानियामा भने अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको छ । यतिबेला तास्मानियामा १८ जनाले कोरोनाविरुद्ध उपचार गराइरहेका छन् जसमध्ये ७ जना मात्रै अस्पतालमा छन् । आईसीयूमा राखेर कसैको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन भने कोरोनाकै कारण गएको २४ घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन ।
पीसीआर परीक्षण र एन्टीजेन परीक्षणबाट १३ सय ७९ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । उता होबार्टको जेलमा रहेका कैदीलाई पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । स्थानीय रिस्डन जेलमा रहेका दुईजनामा कोरोना देखिएको हो ।